Gabdhaha Soomaalida iyo ragga ajaanibta | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Gabdhaha Soomaalida iyo ragga ajaanibta
Gabdhaha Soomaalida iyo ragga ajaanibta
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 18-07-16 8:26 AM Gabdhaha Soomaalida ah maxay ku arkeen ragga ajaanibta ah? waa qodobkeena dooda ee maanta. Waxaan baaritaan ku sameeyay goobo ay ku kulmaan dhalinyarada Swedishka ah anigoo kula kulmay gabdho Soomaali ah oo markii aan la sheegeystay si daacad ah iigu waramay.
Gabdhahaan ayaa si cad iigu sheegay in aysan ka helin wiilasha Soomaalida sababo kala duwan owgeed. Labo ka mid ah gabdhaha ayaa ii cadeeyay in dooqoodu uu yahay ragga cadaanka ah (iyadoo aan loo kala sooceyn diintooda). Mar aan wax ka waydiiyay sababta ka dambeysa in aysan ka helin wiilasha Soomaalida ayaa gabdhaha qaar ii sheegeen in ay adagtahay in la aamino wiilasha Soomaalida, in aysan ahayd kuwo jaceylka si fiican wax uga yaqaana iwm.
Qaasatan waxaan la yaabay in gabdhaha ay iska dhaleen Soomaalida iyo Swedishka aysan ka helin ragga Soomaalida. Arintaas ayaa loo aanayn karaa aabayaashood oo xumeeyay gabdhihii cadaanka ahaa ee ay guursadeen.
Hadaba sidee u aragtaan arintaan. gabdhaha miyaa xumaaday? mise wiilasha ayaa fashil ku yimid oo gabdhihii ku qanci waayeen? doodu waa furantahay…